Milan oo doonaysa daafac qaali ah (Imisa ayuu ku kacayaa?) – Gool FM
(Milano) 04 Luulyo 2016 – Bartilmaameedka 1-aad ee Vincenzo Montella ayaa lagu sheegay daafaca Villareal ee Mateo Musacchio, sida ay wararku sheegayaan.
Macallinka cusub ee Montella ayaa galabta kulan ay albaabadu u xiran yihiin la yeeshay Adriano Galliani, kaasoo ay uga wada hadleen istaraatijiyadda suuqa kala iibsiga.
Sida uu sheegayo Alfredo Pedulla, Montella oo ka faa’iidaysanaya fursadda ay siinayso kaashka cusub ee ka imanaya milkiilayaasha cusub ee Chinese-ka oo lagu wado inay kooxda la wareegaan maalmaha soo socda ayaa cayrsan doona laacibkan oo uu horay u doonayey.
Musacchio ayaa markale maqli doona Aeroplanino, oo laacibkan rabi jirey markii uu joogey Fiorentina.
Laacibkan daafaca ah ee reer Argentine ayaa qandaraaskiisa lagu fasiqi karaa €50m, balse Villareal ayaa la rumaysan yahay inay diyaar u tahay inay sicir midkaa aad uga yar kala xaajoodaan kooxaha raba laacibka.
Wiil yar oo Cudurka Kansarka qaba oo farriin qiiro leh u soo diray Lionel Messi iyo laacibiin hore oo iyana.....